Kuisirwa zvido zvevortex flowmeter
ne admin pane 2021-04-26
1. Kana uchiyera zvinwiwa, vortex flowmeter inofanirwa kuiswa paipi inozadzwa zvizere nepakati yakayerwa. 2. Kana iyo vortex flowmeter yaiswa paipi yakatwasuka, simba rekupisa kwetembiricha pane inotepfenyura inofanirwa kunyatso fungisisa ...
Iyo vortex flowmeter inogona kuyera kuyerera kwegasi, mvura uye chiutsi, senge kuyerera kwevhoriyamu, kuyerera kwemazhinji, kuyerera kwevhoriyamu, nezvimwe.Miyero yekuyera yakanaka uye iko kurongeka kwakakwira. Iyo ndiyo inonyanya kushandiswa mhando yeiyo mvura kuyerwa mumabhomba mapaipi uye ine yakanaka kuyerwa mhedzisiro. Chiyero ...
Kupatsanurwa kwemvura inoyerera
ne admin pane 2021-04-07
Kupatsanurwa kwemidziyo yekuyerera kunogona kukamurwa kuita: volumetric flowmeter, velocity flowmeter, target flowmeter, electromagnetic flowmeter, vortex flowmeter, rotameter, kusiyanisa kumanikidza flowmeter, ultrasonic flowmeter, Mass kuyerera mita, nezvimwe. 1. Rotameter Float flowmeter, inozivikanwa se r ...
Ndehupi hunhu hwemhepo inoyerera mamita?
Kune avo vanofanirwa kushandisa steam kuyerera mamita, ivo vanofanirwa kutanga vanzwisisa hunhu hwerudzi urwu rwemidziyo. Kana iwe uchiwanzo kudzidza zvakawanda nezve iyo michina, iwe unogona kuzvipa kune wese munhu. Rubatsiro rwakaunzwa rwakakura kwazvo, uye ndinogona kushandisa michina nerunyararo rwepfungwa. Saka ndedzipi ...
Notification yekugadzirisa mitengo
Vanodiwa Changamire: Maita basa nekuvimba kwenguva refu kwekambani yako nerutsigiro kukambani yedu yeAGG munguva yemisodzi yapfuura! Isu takaona shanduko dzemusika pamwe chete ans vanovavarira kugadzira yakanaka musika ecology. Mumazuva anouya, tinotarisira kuramba tichishanda pamwe boka rako uye mberi han ...